Non-qaboojiye Centrifuge Factory, Shirkado cusub | Shiinaha Non-qaboojiyay Centrifuge-saareyaasha
Home » Products » Qalabka Laboratory » Centrifuges Laboratory » Centrifuge Non-qaboojiye
Bogsii Force xawaaraha sare ee centrifuge shakhsi Neofuge 13 bixiyaan saamayn culus ee aad u fiican iyo waa u fududahay in la isticmaalo iyadoo isku halaynta sare iyo ammaanka. Waa in la si weyn loo isticmaali karaa in shaybaarrada, rugaha caafimaadka iyo machadyada cilmi-baarista.
Bogsii Force Neofuge 15 bixisaa shaqeynayaan saddex centrifuges:-awood sare, centrifuge guud-Ujeeddada for goynta unug; centrifuge-xawaaraha sare ah kala lysates cell, iyo microcentrifuge ah roobabka DNA.
Bogsii Force Neofuge 1600 centrifuge shaybaarka benchtop dhigaya heerarka tayada, design, iyo hal-abuurka ka timaada dhaxal xagga sannado badan oo waayo-aragnimo. Neofuge 1600 xoojinaayo badnaan codsiga ay ka mid yihiin a-awood sare, centrifuge guud-Ujeeddada for goynta unug; centrifuge-xawaaraha sare ah kala lysates cell, iyo microcentrifuge ah roobabka DNA.